फेरी अस्ताए अर्का कलाकार, सुटिङकै क्रममा निधन - chiyagaff
चिया गफ बिशेष
फेरी अस्ताए अर्का कलाकार, सुटिङकै क्रममा निधन
अशोज ३, २०७८ अशोज ३, २०७८ Chiya GaffLeaveaComment on फेरी अस्ताए अर्का कलाकार, सुटिङकै क्रममा निधन
काठमाडौं । ‘हर्के हवल्दार’ टेलिश्रृंखलाका चर्चित हाँस्य कलाकार रमेश केसी ‘मट्टारे’ को सुटिङ सेटमै निधन भएको छ ।
सुटिङकै क्रममै निधन भएका ६९ वर्षीय केसीको आइतबार नै पशुपति आर्याघाटमा अन्त्येष्टि गरिएको कलाकार संघका अध्यक्ष रवीन्द्र खड्काले जानकारी गराएका छन् ।
‘हर्के हवल्दार’ ले बनाउन लागेको एउटा गीतको सुटिङका लागि उहाँ काभ्रेस्थली भन्ने ठाउँमा आफै मोटरसाइकल चलाएर पुग्नु भएको रहेछ । एकछिन बसेर विष्णु सापकोटा ‘हर्के’ सँग बातचित पनि गर्नुभएछ । त्यसपछि सुटिङसेटमै बेहोस् हुनुभयो । अस्पताल लैजानुअघि नै उहाँको निधन भइसकेको रहेछ’, रवीन्द्रले सुनाए ।
‘मट्टारे’ लामो समयदेखि मुटुका बिरामी थिए । उनको परिवारमा श्रीमती, दुई छोरा र एक छोरी छन् । कलाकारहरुले ‘मट्टारे’ को निधनसँगै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा श्रद्धाञ्जली दिएका छन् । कलाकार उत्तम केसीले फेसबुकमा लेखेका छन्,
‘वरिष्ठ कलाकर्मी रमेश केसी ‘मट्टारे’ ज्यूले यो संसार त्याग्नु भएको दुखद् खबरले मर्माहत तुल्याएको छ । भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै उहाँको आत्माको चीरशान्तिको कामना गर्दछु । अभिनय कर्म गरिरहेकै अवस्थामा उहाँको दुखद् निधन भएको हो ।’
कलाकार गोपाल ढकाल ‘छन्दे’ ले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘हार्दिक श्रद्धाञ्जली रमेश दाइ । आफ्नो जीवनको धेरै समय कलाकारितामा बिताउनु भएको, विशेष गरी हाँस्यव्यंग्य विधामा चर्चित नाम, मिलनसार व्यक्तित्व रमेश केसी ‘मट्टारे’ दाइको असामयिक निधनले स्तब्ध बनायो । स्वर्गमा बास होस् दाइ ।’
३२ र ३५ बर्षका तीन महिलाहरु एकसाथ पक्राउ ! पुरुषलाई रेष्टुरेन्ट बोलाएर यस्तो गरेछन्
विमल र सावित्रा किन पुगे दोहा?
‘पिरती छ धेरै’ बजारमा
फाल्गुन ८, २०७७ फाल्गुन ८, २०७७ Chiya Gaff
नेपाली श्रमिक शो’षण गर्ने मलेसियाको यी कम्पनीमा जाँचबुझ सुरु
मंसिर २७, २०७८ मंसिर २७, २०७८ Chiya Gaff
नेकपा समाजवादीलाई लाग्यो नसोचेको झट्का, नेपालले पार्टी छोडेको गरे घोषणा !
भदौ १४, २०७८ भदौ १४, २०७८ Chiya Gaff
मन्त्री र सांसदले कहिले लगाउँदैछन् कोरोना खोप ?
फाल्गुन १६, २०७७ फाल्गुन १६, २०७७ Chiya Gaff
यसरी निम्तिन्छ ढाडको समस्या, समाधानको उपाय के ?
होलस्टिक होम केयर सेन्टरको उद्घाटन कार्यक्रम (भिडियो)
फाल्गुन १५, २०७७ फाल्गुन १५, २०७७ Chiya Gaff
होलस्टिक होम केयर सेन्टरको उद्घाटन कार्यक्रम
ओलीले देव गुरुङलाई प्रमुख सचेतकबाट हटाएर विशाल भट्टराईलाई दिए जिम्मेवारी
फाल्गुन १४, २०७७ फाल्गुन १४, २०७७ Chiya Gaff
८० विद्यालयमा नर्स राख्ने तयारी
शहनाज गिल र सिद्धार्थ शुक्लाको बिहे
फाल्गुन १३, २०७७ फाल्गुन १३, २०७७ Chiya Gaff
नगरपालिकाबाट उपमहानगरपालिका बनाइयो तर ताल उस्तै
फाल्गुन १०, २०७७ फाल्गुन १०, २०७७ Chiya Gaff
तातोपानी नाका पुनः सञ्चालनमा
पशुपतिमा भारतबाट ब्राह्मण बोलाइ क्षमापूजा शुरु
फाल्गुन ९, २०७७ फाल्गुन ९, २०७७ Chiya Gaff
करीना र सैफले गरे आफ्नो दोस्रो बच्चालाई स्वागत
वार्ताका लागि सकारात्मक : विप्लव
चितवनको एउटा पुरै गाउँनै त्रसित, हेर्नुस् यस्तो छ अवस्था..
माघ ६, २०७८ माघ ६, २०७८ Chiya Gaff
कतार बिश्वकपमा नेपालले कति सुरक्षाकर्मी कतारमा सहयोगको लागी पठाउला ?
मलेसिया सरकारले जारी गर्यो यस्तो अलर्ट, अटेर गरे नोक्सान बेहोर्नु पर्ने..
शून्य लागतमा तत्काल २ हजार नेपाली बेलायतले रोजगारीका लागि लैजाने, तलब मासिक ५ लाख
युएईमा बार्षिक बिदा र परिक्षण अवधिको बारेमा नयाँ घोषणा, श्रमिकलाई फाइदा हुने
चिया गफ मिडिया प्रालीद्वारा संचालितचियागफ डटकम पत्रकारिताको मुलभूत सिद्दान्तमा रही सत्य तथ्य अनि निस्पक्ष पत्रकारिता गर्ने उदेश्यले संचालन गरिएको डिजिटल पत्रीका हो |